l0vetodream inoti iyo iMac nyowani ichave yakatokura pane iyo yazvino | Ndinobva mac
l0vetodream inoti iyo iMac nyowani ichave yakatokura pane iyo yazvino
Kana paine zvishoma zvasara kuti tione chiitiko cheApple uye nekuziva izvo iyo kambani ichatiunzira isu yenguva pfupi-yenguva yemberi, makuhwa anotanga nezvatinogona kuona. Muongorori l0vetodream akataura kuti inotevera uye runyerekupe iMac ichaunzwa ichave komputa chikuru chatakaona kusvika zvino. Huru pane yazvino iripo 27-inch modhi.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune yakasarudzika ongororo 9to5Mac, muongorori l0vetodream kuburikidza neako Twitter social network account yataura kuti Apple yakagadzirira kuvhura iMac nyowani neApple Silicon pasi rose. Nhau hombe ndedzekuti iyi komputa nyowani ichave iine skrini hombe pane dzose. Ichave yakakura kudarika iripo 27-inch. Zvinotofungidzirwa kuti zoom kusvika pamasendimita makumi matatu nemaviri. Isu tatoziva kuti Apple parizvino inotengesa iMacs mumatanho maviri: 21,5-inch modhi uye 27-inch modhi.
Runyerekupe nezve iMac nyowani iri kuyambira kuti ichave nekugadzirisa patsva, se iMac yazvino maindasitiri dhizaini yakadzokera kumashure angangoita makore masere ine hukuru hwakakura hwekuratidzira bezels uye chassis yebeveled. Zvinotarisirwa kuve nehunyanzvi hweiyo iPad Pro 2018 ine yakaderedzwa bezels uye flatter mativi. Muna Ndira, Bloomberg akataura kuti iMac ichataridzika yakafanana neiyo Pro Ratidza XDR.
Zviripachena kuti isu tinofanirwa kuona a iMac nyowani neApple Silicon iri kuuya munguva pfupi. Kunyanya kunyanya mushure mekunge kambani yeAmerica yafunga bvisa iMac Pro kubva pamusika. Nekudaro, kusangana nezvinodiwa naTim Cook kuona kuti ese maApple makomputa atove neiyo chip yekambani nyowani
Zvino, isu hatizive kana makuhwa uye kufungidzira kwe0ododream zvichazadzikiswa. Inguva chete ndiyo ichatitaurira kana fungidziro dzako dziri dzechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » l0vetodream inoti iyo iMac nyowani ichave yakatokura pane iyo yazvino
Yepamutemo WWDC zuva, Xiaomi AirPower uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac